Dad-cunkii Hooyadiis dilay, kadibna Jirkeeda Raashin ka dhigtay oo Xukun lagu riday (Sawirro) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Nin u dhashay dalka Spain ayaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah kadib markii uu dilay hooyadiis, isla markaana uu cunay haraadiga meydkeeda oo uu Qaboojiye geliyay.
Ninkan falkan naxdinta leh ku kacay ayaa lagu magaacaabaa Alberto Sánchez Gómez, wana 28 sono jir ah, iyadoo la xiray sanadkii 2019 kadib markii Booliska ay ka heleen qeybaha jirka hooyadii Gurigii uu kula noolaa iyagoo ku jira weelal Caag ah.
Maxkamadda ayaa diiday doodaha Sánchez ee ah inuu la kulmay xaalad isku buuq ah iyo xanuun maskaxeed markii uu dilka dhacayay. Wuxuu hadda geli doonaa 15 sano oo xabsi ah dil ah iyo shan bilood oo dheeri ah.
Waxaa sidoo kale lagu amray inuu siiyo walaalkiis lacag dhan 60,000 Euro oo u dhiganta $ 73,000 Dollar oo magdhow ah.
Booliiska Magaalada Madrid ayaa tegay Guriga oo ku yaalla bariga Madrid bishii Febraayo 2019 ka dib markii qof saaxiib la ahaa uu Booliska ku wargeliyey Xaalad aan caadi ahayn oo ka jirta Guriga oo ay ku nooleyd hooyada la dilay ee María Soledad Gómez oo ahayd 60 Sano jir.
Intii ay socotay dhageysiga dacwadda, maxkamadda ayaa maqashay in Sánchez, oo markaas 26 jir ahaa, uu ceejiyey hooyadiis markii ay isku dhaceen ilaa ay ka dhimato, kadibna uu jarjaray, isagoo cunay qaybo ka mid ah jirkeeda labadii toddobaad ee ku xigay, isaga oo qaar siinaya eeygiisa.
Warbaahinta Dalka Spain ayaa shaacisay in ninkan uu Boolisku ku yiqiin rabshad joogto ah oo uu kula kaco hooyadiis iyo inuu jabiyay amarka xayiraada markii la qabtay. Alberto Sanchez Gomez, oo 28 jir ah, ayaa loo aqoonsaday inuu yahay dilaaga dadka cuna.
Garsoorayaasha Maxkamadii lasoo taagay oo ahaa, lix haween ah iyo saddex rag ah, ayaa meesha ka saaray sheegashada Sanchez Gomez ee ah inuu maskaxda ka xanuunsanaa markii uu dilayey hooyadiis.
Previous articleSaraakiil hordhac u ah Booliska AMISOM ee la geynayo magaalada Garbahaarey oo gaaray…
Next articleSiyaasiyiinta Waqooyi oo Farmaajo ku eedeeyay inuu farageliyey Guddiyada Doorashada Somaliland